5 Film oo dhiiragelin ah - NETBEINS
:5 Film oo dhiiragelin ah
Filimaanta, gaar ahaan kuwa Ameerikaanka ah waxaa loo sameeyaa qaar badan oo ka mida in bulshada lagu dhiirrigeliyo, laguna baddalo hab-fakarkeeda, qaybtood buuggaag dhiirrigelin ah ayaa laga keenay amaba laga qoraa filinka ka dib. Filimaantaas waxay kugu kallifi karaan inaad u fikirto si ka duwan sidii hore ama ka suuraysato waxaadan suureysan jirin. Mararka qaarkood […]
By admin August 3, 2019, 10:25 AM
Filimaanta, gaar ahaan kuwa Ameerikaanka ah waxaa loo sameeyaa qaar badan oo ka mida in bulshada lagu dhiirrigeliyo, laguna baddalo hab-fakarkeeda, qaybtood buuggaag dhiirrigelin ah ayaa laga keenay amaba laga qoraa filinka ka dib. Filimaantaas waxay kugu kallifi karaan inaad u fikirto si ka duwan sidii hore ama ka suuraysato waxaadan suureysan jirin. Mararka qaarkood waxay kugu kallifaan inaad is weyddiiso su’aalo adag oo ku saabsan naftaada, aadna xasuusato noloshaadii hore si aad u garawsato halka aad taagan tahay. Mar kasta oo ay dadku weynaadaan waxey nolosha usii qaataan si ka adag markii hore, taasina waxey keentaa iney ilaawaan waxbadan oo ay mahadin jireen markii hore.
Filimaantaan hoose haddii aad daawato wax badan ayey ka baddali doonaan sida aad u aragto naftaada, nolosha qeybaheeda kala duwan iyo dunida inteeda kaleba, akhris wanaagsan, waana rejeyneynaa inaad daawan doonto ugu yaraan mid ka mid ah:
1: Forrest Gump- Waa Film laga sameeyey Novel lagu magacaabo isla magacaan, oo ku saabsan wiil yar oo maskaxda naafo ka ah, laakiin u dhaqma si daacad ah, waxkastana u sameeya inuu ka fisho wanaag. Hooyadiis ayaa si fiican u tarabiyeyneysa, ku ababineysa inuusan cidna ka duwneyn. Nolosha iskuulka ayey carruurtu caynayaan, faquuqayaan oo ay iskala weyn yihiin marka laga reebo gabar yar oo lagu magacaabo Jenny oo ah qofka keliya ee oggolaaneysa inuu kursiga la fariisto inta baska la saaran yahay.
Wuxuu ku biirayaa kooxda kubadda cagta ee iskuulka, taas oo u sahleysa inuu helo Scholarship Jaamacadeed, kadibna ciidamada Mareykanka ayuu ku biirayaa, waxaana loo dirayaa dagaalkii Vietnam, halkaas oo magac iyo sumcad badan kasoo hoynayo.
2: Persuit of Happiness wuxuu ku saabsan yahay Aabbe faqiir ah, shaqo la’aan ah noloshuna ay ku adkaaneyso isaga iyo reerkiisa ilaa ugu dambeyn ay ka tagto xaaskiisu dhaqaalo xumo darteed, laga soo saaro guriga kirada oo uu iska bixin waayey awgeed, isaga iyo cunugiisa yarna ay ku hoyanayaan boosteejooyinka laga raaco tareennada iyo basaska, laakiin isma dhiibayo aabahaas ilaa marka dambe uu shaqo ka helo shirkad weyn.
3: The Shawshank Redemption wuxuu ku saabsan yahy nin bangi ka shaqeyn jiray muddo oo loo xirayo dil uu geystay xaaskiisa iyo saaxibkeed, kadibna xabsiga ku jiraya muddo 19 sano ah, laakiin halkaas ay isku baranayaan saaxib kiis ka celinaya rag gaangisterro ah oo xabsiga ku jir dilaya.
4: Rocky waa qisada iyo sheekada uu shirkadda Hollywood kusoo galay jilaaga Sylvester Stallone ee ay Soomaalidu u taqaan Rambow. Waa Film dunida ku leh saameyn badan, gaarayna heer loo bixiyo magaciisa baabur, alaabta guryaha iyo dharka carruurta. Waa film ku saabsan nolosha nin faqri ah, aan waxba baran laakiin qalbi wanaagsan, jecelna ciyaarta feerka, kadib ninkaas wuxuu la ciyaaraya ciyaar feer ninka dunida u haysta tartanka feerka oo ku casuumaya ciyaartiisii ugu dambeysay ee feerka isagoon weligiis laga badin ayuu ka badinayaa sidaas na guul darro ku macsalaameynayaa. Waa Film tixane ah, oo gaaraya ilaa 5 qeybood, ayna ku jiraan casharro badan oo nololeed oo taabanaya qof walba.
5: Saving Private Ryan waa film ku saabsan 8 askari oo bad-baadineysa hal wiil oo ku jira furinta hore ee dagaalka. Dagaalkii labaad ee adduunka ayaa socda dad badan ayey dowladda Mareykanku ku qasabtay iney galaan dagaalka, dadkaas waxaa ka mida 3 wiil oo ay korsatay islaan waayeel ah, islaantii oo oyneysa ayaa imaneysa wasaaradda Gaashaandhigga waxey ku oyneysaa in loo soo celiyo wiilasheeda kii ugu yaraa, sidaas ayaa loogu dirayaa 8 nin iney wiilkaas ka soo bixiyaan dagaalka, isagoo weliba ku go’doonsan furin ku taalla dalka Burma. Wuxuu filmku ku billaabanayaa wiilkaas oo weynaaday oo dul taagan qabriga raggii isaga loo diray iney soo bad-baadiyaan, oo ay qaarkood dhinteen, isagoo weydiinaya xaaskiisa oo waayeel ah ma istaahila iney intaas oo nin nolosheyda u dhintaan, kadibna waxaa lagu tusayaa noloshii wiilkaas iyo sida loo soo badbaadiyey.